The Ab Presents Nepal » सास हुँदा हो अन्नपानी, लासलाई त के चाहिन्छ र सरकार ? जनताको गुनासो
सास हुँदा हो अन्नपानी, लासलाई त के चाहिन्छ र सरकार ? जनताको गुनासो
वैशाखको तराईको गर्मी, टन्टलापुर घाम, घरिघरिको आकाशको गर्जन र पानी सबै सबै खपेर सडक नापिरहेका मजदुरलाई नाथे कोरोनाको क्यै डर छैन छ, छ त केबल भोका जहान परिवार, पेट र घामपानी छेक्ने ओतको ।त्यो तातो सडकले पैताला के पोलेको होला र जति दुखीजनहरुको मन पोलेको छ । कामकै लागि बास छोडेर झिटिगुन्टा बोकेर सस्तो श्रम बेच्न कहाँ हो कहाँ पुगेका नागरिकलाई सरकार, दलका नेताहरुले किन चिन्दा हुन् ? उनीहरुलाई चिन्ने बेला अहिले कहाँ हो र ? अझै छ नि चुनाव आउन थुप्रै समय । त्यतिबेला चिन्नेमात्र होइन । बुँइ बोक्नैपर्छ ।
अहिले त भोट चाहिएको छैन् नोट खर्च गरेर उनीहरुलाई कहाँ ओत दिन सकिन्छ र ? सरकार श्रमिकको विचल्ली नहेर्ने हो भने यो कोरोनापछि चुनाव घोषणा गर त तिनलाई बोक्न कुद्नेहरुको जुलुस निस्कन्छ । सरकारलाई टन्टै साफ ।रातदिन मालिक (सरकार)का बडे-बडे भवन बनाउँदा बनाउँदै खिइएका हात, चिल्ला कार, पजेरा कुद्न राजधानीका सडक चिल्लाउदाँ चिल्लाउँदै फाटिसकेका पैतलासँगै रगत र पसिना बगाएर पहरा फोरेर कमाएर दुईपैसाको जोहो गर्नेहरु कोरोना कहरले ठप्प भए । रातदिन उनीहरुका लागि बगाएका पसिनाको मूल्य यो कहरमा कहाँ हुन्थ्यो र ? काम गरेको दिन नुनपानी पाइने, नगरेको दिन दाम्रिएको पेटसँगै सुत्नुपर्ने मजदुरलाई सरकारले लकडाउन भनिदियो ।
लकडाउनमा हुनेखानेलाई घरभित्र बस्नु भन्ने सरकारको उर्दीले असर गरेन होला तर हुँदाखानेको मुखमा माडपानी रोकियो । घर छोडेर श्रमकै लागि हानिएकाहरुको श्रम रोकियो, सँगै रोकियो दानापानी पनि । शहरमा सबैलाई आफ्नै ध्याउन्नले छोपेको छ । बल्ल-बल्ल कटेरोमा डेराको बास बसेकालाई नुन र पानी पनि दिने कोही भेटिएनन् ।सरकारले राहतको नाम उच्चारण गर्‍यो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा । टाँठाबाठाका हातखुट्टा कान पनि टाँठा भए । राहत दिने सरकारी मान्छेहरु हुन् वा सरकारका मान्छेहरु हुन् उनीहरुले आह्वान गरे समस्या परे भन्नु सरकारले सबै दिन्छ । मजदुरलाई पर्‍यो फसाद अन्न त एउटा गेडो नि छैन् भन्ने कसलाई ? ठेकेदार साहुलाई भन्यो, मसँग छैन् सरकारले दिन्छ, सरकारलाई भन्नु, भन्छ ।
न त नेताका पिछलग्गु । एक दिन होइन, दुईदिन होइन पानी पनि किनेर खानुपर्ने काठमाडौंमा भोकभोकै सातादिन बितेपछि हिँडेर घरतिरको सडक नापेका हुन् उनीहरुले । ए, भान्सामा चामलको बोरा थन्काएर अर्को बोरा लिन लाम लाग्नेहरु अलिकति सोचीदेउ, मरेपछि बेरिने कात्रोमा गोजी हुँदैन ।सरकारले बरु सडकमा निस्कीयौ भनेर उनैलाई लाठी बजाउन भ्यायो । गस्ती हिँडेको प्रहरीको भ्यानले साइरन बजाएर कुद्यो तर सयौँ-सयौं किलोमिटर नापिरहेका मजदुरलाई कि त बसेकै ठाउँमा दानापानी दिन कि त घर पठाउन अहँ कसैको चित्तले भेटेन यो कुरा ।
त्यसै होइन नी फेसबुकमा, उसो त चीनमा रहेका नागरिक ल्याउन पो हेलिकप्टर चार्टर हुन्छ । भारतमा रहेका मजदुरलाई काँडेतार लगाइन्छ । भाटेकारबाही गरिन्छ भन्दै नागरिकले रिस पोखेको ।हुन त, आलेखभरी सरकारलाई मात्र गाली गरेको भन्ने आरोप लाग्ला सरकारले नगरेको होइन, आपतमा रासनपानी दिएकै छ, घरबहाल छुट भनेकै छ । करछुट भनेकै छ । विलम्वशुल्क छुट भनेकै छ । आपतकालिन सेवा दिएकै छ । तर निमुखासम्म अन्नपानी पुगेन । गुनासो यत्ती हो । सरकारले मात्रै गरेन भन्नु पूर्वाग्रही होला । जसले गर्छ, उसैको कमजोरी थाहा हुने हो । उसैबाट बढी आशा हुने हो ।
सरकारवेगरका दल त मैले अहिले देखेकै छैन् । कता सुतिरहेका छन् खै कुन्नी ? धन्ने प्रभु, विश्वप्रकाशहरु फेसबुक लाइभमा छन्, फेसबुकमा गगन थापाहरुले मलाई जनप्रतिनिधि भन्न लाज लाग्यो भनेका छन् ।थापाजी, जनार्दनहरुलाई त जनप्रतिनिधि भन्न कुनै लाज छैन त । चुनावमा खर्च गर्न तपाइलाइ सरकारले पैसा दिँदैन त । यतिबेला मजदुरका बारेमा गर्न सरकारले आव्हान गर्नुपर्ने ? सरकारले पैसा छुट्याइदिनुपर्ने ? धन्न कोही जनप्रतिनिधिले चामलका बोरा बोकेर जनताका घरदैलोमै गएका छन् र यहाँहरुका लाज छोपिदिएका छन् । यो यतिबेलाको सत्य कथा र यर्थाथ व्यथा हो जतिबेला देशैभरका साना-ठूला सिंहदरबारका सत्तामा बस्नेहरु हिजो कुनै दिन जीवन शर्माको गीत बजाएर नाँचिरहेका थिए ।